तपाईंको व्यापार र नदीको रूपमा मार्केटिंग | Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 3, 2009 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
आज बिहान लोरेन बलको साथ बोल्ने पसलमा रमाईलो समय थियो। लोरेनको कम्पनी सानादेखि मध्यम आकारका व्यवसायका लागि रणनीतिक सामग्री पहलमा विशेषज्ञता दिन्छ इंडियानापोलिस - ब्लगिंग, न्यूजलेटरहरू र प्रेस विज्ञप्ति सहित। लोरेन एक ठूलो समर्थक र उनको पति भएको छ एन्ड्र्यू एक महान मान्छे र अविश्वसनीय कलाकार हो.
लोरेन र मैले धेरै ठूला निगमहरूमा काम गर्ने अवसर पाएका छौं, तर हामी सानो व्यापारको फुर्ती र उत्साहलाई प्रेम गर्दछौं। लोरेन उनको सबै इंटर्न धेरै वर्ष को संख्या को लागी एक ठूलो व्यवसाय को लागी काम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ... म यसको सिफारिस पनि गर्दछु। एक ठूलो कम्पनीमा नेतृत्व मा सिकेका पाठ सानो व्यवसाय चलाउँदा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
धेरै ठूलो व्यवसायमा, उत्पादकता कायम राख्न, तपाईंले नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्छ। पर्यवेक्षकहरूले नेताहरूको निरीक्षण र कर्मचारिहरूको निगरानी गर्छन्। प्रबन्धकहरू प्राथमिकताहरूमा सन्तुलन राख्दछन् र अवरोधहरू हटाउँछन्। निर्देशकहरूले दीर्घकालीन दृष्टि कायम गर्न र विभाग पथमा नै रहेको कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। उप राष्ट्रपतिहरूले दीर्घकालिन दर्शन र संगठनहरूको रणनीति सिर्जना गर्छन्। शीर्ष गाईडमा फोलकहरू, पदोन्नति गर्दछ, चियर्लिड गर्नुहोस्, र व्यापारको निरीक्षण गर्नुहोस्।
[फोटोaबाट क्रप गरिएको पृष्ठभूमि जीनोममा फेला पर्‍यो]
लोरेन एक सुन्दर रूपको साथ आए। कम्पनीमा एक नेता हुनु धेरै नदी नियन्त्रण जस्तै छ। यदि तपाइँको नदी नदी रोक्नु हो भने, तपाइँ समस्याहरूमा चल्नुहुनेछ! कम्पनीहरूको गति छ ... तपाईं एक ठूलो गडबड बनाउन लाग्नुभएको छ यदि तपाईं बस बाँधहरू फाल्न को लागी प्रयास गर्न जारी राख्नुहुन्छ वा पानी जहाँ यो जान चाहँदैन रेडरेक्ट गर्नुहोस्। नदीलाई माइक्रोमैनेजिंगले कुनै गडबडी बाहेक केही परिणाम दिँदैन।
नेताको उद्देश्य पानीको गतिलाई पानीको दिशालाई दिशाको दिशामा चल्दै राख्नको लागि उपयोग गर्नुपर्दछ। संगठनका प्रत्येक नेता र त्यसपछिका टोलीहरू र कर्मचारीहरू गति बदल्नका लागि उपकरणहरू हुन्। यसको लागि एक नेतालाई अनुकूलन, सशक्तिकरण, र आवश्यक कार्यहरू प्रस्तुत गर्नका लागि आवश्यक पर्दछ ... र क्षितिजमा नजर राख्नुहुन्छ र कम्पनी जाँदै छ।
यो सामाजिक मिडिया र अनलाइन मार्केटिंग विपरीत छैन। हतार गरेर निर्माण अभियानहरू र सँधै परिवर्तन गर्ने रणनीतिहरूको परिणाम यहाँ र त्यहाँ सानो परिणाम हुन सक्छ। दीर्घकालीन रणनीतिहरू जसले यसको शक्तिहरूको लागि प्रत्येक माध्यमलाई उचित ढ all्गले आबटित संसाधनहरूको साथ लिने गर्दछ, तपाईंको कम्पनीको लागि राजस्वको नदीलाई निर्देशित गर्न सक्छ। नदी अविश्वसनीय शक्ति संग निरन्तर गर्न को लागी गइरहेको छ ... प्रश्न यो हो कि तपाईं त्यो शक्ति दोहन वा यो लड्न जाँदै हुनुहुन्छ!
WordPress आईफोन प्लगइन्स: व्यवस्थापक र थिम